Ma Chu Haymun Aung
တနေကုန် ဖြူဝင်းပြီး ကြည်စို glow နေဖို့ ဓီအတွဲလေးပဲလို
စားချင်တာစား ဝါးချင်တာဝါးတဲ့ Foodies တို့အတွက် 🦷 24/7 Tooth Balance ရှိတယ် 🦷 အစားကြိုက်တဲ့ Foodies တို့ရေ... စားချင်တာစား ဝါးချင်တာဝါး ဖို့အတွက်ဆို 🦷 သွားလေးတွေ ကျန်းမာနေမှ OK မယ်နော် 🦷 24/7 Tooth Balance သွားတိုက်ဆေးကို ပုံမှန် အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင် သွားပိုးပေါက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတယ်။ 🦷 သွားကို ဖြူစင်စေပြီး ကျန်းမာအောင် ထိန်းသိမ်းပေးတယ်။ 🦷 ခံတွင်းနံ့ ကောင်းမွန်စေပြီး သွားပိုးစားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတယ်။ 🦷 ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွားရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ Gingivitis နှင့် Periodontitis တို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သွားရဲ့ အသွင်အပြင်ကို လှပနှစ်လိုဖွယ် ဖြစ်လာစေပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လောက်စားစား 🦷 သွားလေးတွေ ကျန်းမာပြီး လှပနေမှာ အသေအချာပဲနော် 24/7 Tooth Balance (180g) တစ်ဘူး – ၇,၅၀၀ ကျပ်
Ma Thu Zar Min
Focus ကထွက်တဲ့ Snail ကြောင့် ပြောင်းလဲသွားသော မမကျေနပ်နေတဲ့ရုပ်ကြီးနဲ့ မိုးချုပ်လည်းSnail ကြောင့်အမြဲတမ်းယုံကြည့်ရှိသောကျမ. Focus beauty Agent
Daw Kay Khaing Zin
သွားကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ Super Clean 🪥 ‌ခံတွင်းနံ့မွှေးကြည်ဖို့ Super Clean 🪥 ခံတွင်းအမှေးပါးယောင်သက်သာစေဖို့ Super Clean 🪥 လည်ချောင်းနာရောဂါသက်သာစေဖို့ Super Clean 🪥 #KKZ လက်လီ/လက်ကားမှာယူလိုပါက 👉09763603811👈 Made in Korea
ညအိပ်ခါနီး မျက်နှာသစ်ပြီး 💦💦 တိုနာနဲ့အညစ်အကြေးတွေဖယ်ရှားမယ်💁 အပြာရောင် Sleeping Cream‌လိမ်းမယ်💁 ခရုဖြူလုံးလေး ပြန်ထပ်လိမ်းပေးမယ်💁 ဒါဆိုရင် ရေဓာတ်ပြည့်ဝပြီး ကြည်လင်တဲ့မျက်နှာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီခ မှာလိုပါက>09763603811/cbသို့ #NKKZ
𝗙𝗢𝗖𝗨𝗦 𝗕𝗲𝗮𝘂𝘁𝘆 မှ ထုတ်လုပ်တင်သွင်းနေသော အောက်ပါ ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ 🚫🚫🚫 𝗙𝗢𝗖𝗨𝗦 𝗕𝗲𝗮𝘂𝘁𝘆 ၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ရောင်းစျေးအောက်လျော့၍ ရောင်းချပါက ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အရေးယူခြင်းခံရမည်။ 🚫🚫🚫 1. Snail Wish Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - 31,000 Kyats (FDA No. MN201234482) 2. New Skiin Foam Cleanser (150 g) တစ်ဘူး - 10,000 Kyats (FDA No. MN200630407, MN200630408, MN200630409) 3. New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - 19,000 Kyats (FDA No. MNA2107000318) 4. New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - 20,500 Kyats (FDA No. MN201234582) 5. 24/7 Tooth Balance (180 g) တစ်ဘူး - 7,500 Kyats (FDA No. MN200730718) 6. New Skiin All In One Tone Up Cream (5 g) တစ်ထုပ် - 3,500 Kyats (FDA No. MN191023848) 7. New Skiin Whitening Selfie Face Mask (၅ချပ်ပါ တစ်ဘူး) - 15,000 Kyats (FDA No. MN191023849) 8. New Skiin Skin Reborn Solution (အလုံး၃၀ပါ တစ်ဘူး) - 20,000 Kyats (FDA No. IR-F/2020-B1/069) 9. New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion (300 ml) တစ်ဘူး - 22,000 Kyats (FDA No. MN201234583) 10. Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး - 4,500 Kyats (FDA No. MN200428693) 11. Beaute Cafe Arabica Coffee 37 in 1 (အထုတ်သေး(၁၀)ထုတ်ပါ အထုတ်ကြီး(၁)ထုတ်) - 15,000 Kyats (FDA No. IR-F/2020-B1/1716) 12. Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue (30 Sheets) တစ်ထုတ် - 5,000 Kyats (FDA No. MN200529979) 13. Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue (100 Sheets) တစ်ထုတ် - 12,000 Kyats (FDA No. MN200529979) 14. Ketchup Matte Liquid Lipstick (3 ml) တစ်ချောင်း - 8,500 Kyats (FDA No. MN200529980, MN200529981, MN200529982, MN200529983, MN200529984) 15. Nano Brush တစ်ခု - 12,000 Kyats 16. Nano Spray တစ်ခု - 17,000 Kyats
💛 မနက်မိုးလင်းတိုင်း အရင်ဆုံး သတိရမိတာ 💜 New Skiin Foam Cleanser ပါ 💙 မနက်ခင်းတိုင်း မျက်နှာလေးကို သေချာသန့်စင်ဖို့ဆို New Skiin Foam Cleanser နဲ့မှ ဖြစ်မှာနော် 😉 💜💙💛 အသားအရေအမျိုးအစားအလိုက် ရွေးချယ်စရာ အရောင် (၃) မျိုး ရှိပါတယ်။ 💛 တင်းတိတ်မှဲ့ခြောက် ပျောက်ချင်ပြီး အသားဖြူချင်သူများအတွက်ဆို 💛 Vitamin C 💙 အသားအရေ တင်းရင်းလိုသူတွေ အသားအရေခြောက်တဲ့သူအတွက်ဆို Collagen 💜အဆီပြန် ဝက်ခြံ ဆားဝက်ခြံတွေ ပျောက်ချင်သူအတွက်ဆို Salicylic Acid ပမာဏ နည်းနည်းနဲ့ ထိရောက်တဲ့ သန့်စင်မှုပေးပါတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီး ဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
FOCUS Beauty 2021 Top 1 to 12 တို့ရဲ့ 2022 Calendar Shooting BTS Video ကိုကြည့်ပြီး Phone Bill တစ်သောင်း ကံထူးသူများကို ကြေညာပေးပါတော့မယ်။ Top (12) Leader Su Mon Mon Zaw ရဲ့ Shooting Video ကို ခန့်မှန်းနိုင်သူများထဲမှ Phone Bill တစ်သောင်း ကံထူးသူ (၅) ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးသူများကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဖုန်းနံပါတ်တွေ confirm ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းလေး ဖွင့်ထားပေးပါဦးနော်
🎉 𝐅𝐎𝐂𝐔𝐒 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐂𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫 𝑱𝒂𝒏𝒖𝒂𝒓𝒚 လ ရဲ့ မင်းသမီးလေးက Top 12 Leader Su Mon Mon Zaw (FB-000007) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 🎉 စိတ်ကူးထဲက ပုံရိပ်နဲ့ ထပ်တူကြမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။ 🥰 Art Director & Stylist PuTu Photographer Aung Zaw (Love Space) Hair & MakeUp April Thuta Designer Ko Latt Design Min Min Han